Oomatshini bokuhlamba indalo kunye neengcebiso zokuhlonipha indalo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Oomatshini bokuhlamba kwendalo kunye neengcebiso zokuhlonipha okusingqongileyo
UDaniel Palomino | | Ukonga umbane, ngokubanzi, Yendalo, Itekhnoloji entsha
Umatshini wokuhlamba iimpahla, eso sixhobo sisebenzisa ukuhlamba iimpahla ibangela ifuthe elikhulu kwindalo esingqongileyo Kwaye nangona i-OCU (Umbutho waBasebenzisi naBasebenzisi) ineengcebiso ezithile, ayizizo zonke izinto.
Esi sixhobo sinokusetyenziswa okungafaniyo, oku kuthetha ukuba sisebenzisa into eyihlambayo kunye Enye yeengcebiso ze-OCU kukugcwalisa ngokupheleleyo igubu lokuhlamba iimpahla ukuya ukufezekisa ukuncipha okukhulu kwindleko zamanzi nombane, Ezi-2 kwezi-3 ezibalulekileyo kumatshini wokuhlamba.
Iingcebiso zabo ikakhulu lixesha lokuthenga apho kufuneka sithathele ingqalelo ubuninzi bomthwalo kunye nodidi lombane okanye ukusebenza kwamandla.
La ubukhulu bomgangatho inokushwankathelwa ngolu hlobo lulandelayo:
Kwiintsapho ezinkulu (ngaphezulu kwama-4 abantu): Oomatshini bokuhlamba abanomthwalo ongama-9 kg.
Iintsapho ezinobungakanani obuphakathi: (abantu aba-4): Oomatshini bokuhlamba abanomthwalo ofikelela kwi-8 kg.
Abantu aba-2 okanye aba-3: Oomatshini bokuhlamba ukuya kuthi ga kwi-7 kg umthwalo.
Ukusuka kubantu aba-1 ukuya kwabayi-2: Oomatshini bokuhlamba umthwalo we-6 kg.
Ngokubhekisele kwi iklasi yombane (Oko kuya kuzwakala kuwe) kukulebhelisha izixhobo zombane zokusetyenziswa okunyanzelekileyo kuyo yonke iYurophu kunye nolona luhlu lusebenzayo:
Kwiwebhusayithi ye-OCU unokufumana malunga noomatshini bokuhlamba ezifanelekileyo iimfuno zakho kwaye uzithelekise ngokusekwe kwezi mpawu kwaye ngokucacileyo ixabiso. Cofa apha ukubona isilinganisi se-OCU.
Kodwa le nto ayipheleli apha, yenye yezinto ezichaziweyo ezibangela oko impembelelo enkulu kokusingqongileyo kukusetyenziswa kwamanzi, ngokugqithisileyo, kwindawo nganye yokuhlamba.
Umatshini oqhelekileyo wokuhlamba unokutya ngeenxa zonke Iilitha ezingama-200 zamanzi zilayishwe ngokupheleleyo.
Ukongeza, zimbini iindidi zoomatshini bokuhlamba, abo banomthwalo ophezulu kunye nabo banomthwalo ongaphambili, eyokuqala zizicoci zamanzi ezisebenzisa awona manzi maninzi, ngelixa ezokugqibela zinokuchitha malunga neelitha ezingama-2 nezingama-7 nge-38 kg yomthwalo.
1 Oomatshini bokuhlamba indalo
1.1 "Abaviwa" koomatshini bokuhlamba indalo
1.1.1 Iindidi zoomatshini bokuhlamba indalo
1.1.1.1 Kwimarike yaseSpain
1.1.1.1.1 Imfono mfono yeSamsung
1.1.1.1.2 Indawo eshushu, Aqualtis
1.1.1.1.3 I-Whirlpool iAqua-Steam
1.2 Oomatshini bokuhlamba ngokupheleleyo
1.2.1 UDrumi kunye noGiraDora
1.2.2 I-Bicilavadora kunye noMatshini wokuhlamba iBike (uguqulelo olunqabileyo lokuqala).
1.2.3 Hula Washer. Umatshini wokuhlamba kwi-hula hoop
1.2.4 Vasa ulunge. Ukuhlamba umatshini-indlu yangasese
1.2.5 Hlamba. Shower and washing machine ngexesha elinye
1.2.6 Umatshini wokuhlamba amavili waManzi
1.2.7 I-Dolfi, hlamba iimpahla nge-ultrasound
2 Isithambisi, into yesithathu ebalulekileyo kwindawo yokuhlamba iimpahla
Oomatshini bokuhlamba indalo
Oomatshini bokwenene "be-ecology" bokuhlamba abekho njengoko ubucinga, umatshini wokuhlamba oqhelekileyo nowangoku odla isiqingatha okanye ngaphantsi kombane namanzi kuba "ulungile".
Ngokwam, kukho oomatshini abaqhelekileyo bokuhlamba abanokuthathelwa ingqalelo kwendalo kunye "nezinto eziphilayo".
Okwangoku sihamba kunye neyokuqala, ezo zithathwa njengezinto eziphilayo.
"Abaviwa" koomatshini bokuhlamba indalo
Umatshini wokuhlamba uthathelwa ingqalelo kwindalo esingqongileyo kuba uyahlangabezana noluhlu lwezikhokelo, ekusebenzeni nasekusebenzeni.
Okokuqala konke oko Kuya kufuneka usebenzise ubuninzi beelitha ezili-15 zamanzi kwikhilogram nganye yeempahla. Oku kuhlanjwa kuyaqondakala kumjikelo omde (womqhaphu) kunye namanzi ashushu.
Kumjikelo wakho wokuhlamba, Ukonga umbane kufuneka kube yi-0.23 KW / h kunye nekilo nganye yeempahla.
Kwaye okokugqibela, umbandela awenziwe ngawo umatshini wokuhlamba kufuneka uthathelwe ingqalelo kuba kukho ii-bioplastics ezinokusetyenziselwa ukuvelisa.
Ngale ndlela, ukukhutshwa kwe-CO2 kuncitshisiwe ukongeza ekubeni nefuthe eliphantsi kakhulu kwindalo esingqongileyo njengoko kuyinto enokuboliswa ziintsholongwane.
Kwelinye icala, ukuba kufuneka sithenge umatshini wokuhlamba impahla okanye nasiphi na isixhobo, njengabathengi, kufuneka sithathele ingqalelo ileyibheli yamandla, endikhe ndakhankanya ngaphambili.
Ayizukusazisa kuphela ngokusebenza kwamandla kwesi sixhobo, kodwa iya kuthi isinike amandla esandi, kokubini kwinqanaba lokuhlamba nakwisigaba sokujikeleza, ukunqanda ungcoliseko lwengxolo kunye nezikhalazo ezivela kwabanye abamelwane.
Iindidi zoomatshini bokuhlamba indalo
Okwangoku, ndisenento ethathelwa ingqalelo oomatshini bokuhlamba indalo kwaye kukuba ngaphakathi kweli klasi loomatshini bokuhlamba sinokufumana iintlobo ezahlukeneyo kunye neemodeli.
Umzekelo sinokufumana oomatshini bokuhlamba abangadingi manzi ekusebenzeni kwabo njengezinye ze-LG.
Sele ikhuphe iimveliso ezinje nge-LG Styler, ikhabethe elitshixwayo ngaxeshanye lisivumela ukuba sisuse ivumba elibi kodwa ngeli xesha i-LG ihambile yaya phambili kwaye isinika lo matshini wokuhlamba, ukongeza ekususeni Ivumba elivela ezingubeni liya kusicoca.
Uyilo aluyonto intsha konke konke kwaye lusekwe kwimbono yabafundi abavela kwiYunivesithi kaZwelonke yaseCórdoba, eArgentina.
Aba bafundi bayile Imodeli yeNimbus, esebenza nge-CO2 yendalo kunye nesepha yokubola.
Umjikelo wokuhlamba uhlala malunga nemizuzu engama-30 kwaye ikharbon diokside esetyenziswe ngumatshini iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziswe ngaphakathi kumatshini.
Ukulandela kwale nkqubo inye, i-LG ivelise eyayo umatshini wokuhlamba, nangona ingekho okwangoku kwimarike, ukumiliselwa kwayo okwethutyana.
Kwelinye icala, sele ithengisiwe e-United Kingdom nase-United States, sifumana umatshini wokuhlamba uphawu Xeros. Lo matshini wokuhlamba unako ukuhlamba iimpahla zethu ngaphezulu kweglasi yamanzi.
Ukufezekisa oku, thatha ezinye iipellethi zeplastiki ezibekwe kumatshini wokuhlamba iimpahla, kunye neglasi yamanzi kwaye xa ziphululwa ezingubeni ngenxa yokuhamba kwegubu, ziyakwazi ukucoca ukungcola nokususa amabala.
Ezi bhola, zifana neerayisi ngokobungakanani inokusetyenziswa ukuya kuthi ga kwikhulu kwaye umatshini unesixhobo esibaqokelela ekupheleni komjikelo ngamnye wokuhlamba. Ukongeza, ayinetyhefu kwaye ayibangeli naluphi na uhlobo lokungabikho komzimba.
Sele bevavanywa ngempumelelo kwikhonkco lehotele laseHyatt.
E-Spain singafumana oomatshini bokuhlamba abafana ne-Samsung Ecobubble, iHotpoint, iAqualtis okanye imodeli yeWhirlpool Aqua-Steam.
Imfono mfono yeSamsung
Lo matshini wokuhlamba uthelekiswa nolunye lophawu olunye kodwa kwimodeli eyahlukileyo, awufumani ziphumo zingcono kumandla okanye ekuhlambeni ngokuhambelana nophando olwenziwe yi-OCU.
Indawo eshushu, Aqualtis
Ezi modeli zine-A ++ inkqubo yokusebenza ngamandla ukongeza kwintsebenzo elungileyo.
Ngokunjalo, zenziwe ngeplastikhi ezinokuphinda zisetyenziswe ezifumaneka kwiifriji ezindala kunye noomatshini bokuhlamba, kunciphisa kakhulu ukukhutshwa kwe-CO2 ekwenziweni kwazo.
Ngokukodwa, basungule imodeli engama-6769 ethembisa ngokonga amanzi ubuninzi be-35% ukongeza ku-A ++ amandla asebenzayo.
Oomatshini bokuhlamba ngokupheleleyo
Ngoku ndiza kukubonisa oomatshini bokuhlamba abanendalo ngakumbi kwaye uya kusiqonda isizathu somahluko wam phakathi komnye nomnye.
UDrumi kunye noGiraDora
IGiraDora ngumboniso wewasher kunye nokomisa kwabanye abafundi basePeru kwaye yenzelwe ukuba abantu bahlale kuyo bahlambe kwaye bomise iimpahla zabo ngokuguqula ibhidi.
GiraDora umatshini wokuhlamba
Lo matshini wokuhlambela indalo ibe ngumzobo weDrumi, osungulwe kwimarike kwaye "uphucukile" kodwa unentsebenzo efanayo.
Bayakwazi ukuhlamba iimpahla ezi-6 okanye ezisi-7 ezisebenzisa iilitha ezi-5 zamanzi.
Zombini zinezibonelelo ezintle njengokuzilolonga, ukonga umbane kwaye kunjalo, ukuncitshiswa komkhondo wekhabhoni.
Umatshini wokuhlamba iDrumi
I-Bicilavadora kunye noMatshini wokuhlamba iBike (uguqulelo olunqabileyo lokuqala).
I-biciladora inamandla amakhulu kwimimandla yasemaphandleni apho iimpahla zisahlanjwa ngesandla. Ibhayisekile isetyenziselwa ukukwazi ukuhambisa isigubu somatshini wokuhlamba ngaphandle kombane.
Kwelinye icala, umatshini wokuhlamba ibhayisekile uyafana nowangaphambili kodwa umahluko kukuba umhle ngakumbi kwaye unexabiso eliphezulu nangona unomsebenzi ofanayo nowangaphambili.
Iphuhlisiwe ngabafundi baseTshayina abavela kwiDali Nationalities University.
Umatshini wokuhlamba ibhayisekile
Hula Washer. Umatshini wokuhlamba kwi-hula hoop
Lo matshini wokuhlamba umatshini wenzelwe iinjineli ze-Electrolux. Lo matshini wokuhlamba uqukethe i-hula hoop esonwabisa kwaye isigcina sisemgangathweni ngelixa sihlamba iimpahla zethu.
Ayidli mbane, ukuhlamba kuyawasebenzisa amandla esiwanika ngokuhamba komzimba.
Mane ubeke i-detergent kwaye uqale ukujikeleza!
Ke sinabo bafuna ukwenza uninzi lokonga amanzi ngokudibanisa inkqubo yokurisayikilisha efana:
Vasa ulunge. Ukuhlamba umatshini-indlu yangasese
Iprototype yomxube phakathi komatshini wokuhlamba kunye nendlu yangasese ukufezekisa oko sisebenzisa amanzi amancinci.
Umsebenzi wayo usekwe ekudibaniseni indawo yokuphuma kumatshini wokuhlamba kunye nokungena kwamanzi kwindlu yangasese, ukuze onke amanzi asetyenziswayo ngoku xa kuhlanjwa, asetyenziswe ngokugungxula ikhonkco.
Hlamba. Shower and washing machine ngexesha elinye
Shower kunye nomatshini wokuhlamba ngexesha elifanayo. Uyilo lwayo luya kusivumela ukuba sisebenzise amanzi eshawa ukuhlamba iimpahla.
Kwaye okokugqibela, umahluko ocacileyo wokuhlamba iimpahla kwifashoni yakudala okanye uziphucule.
Umatshini wokuhlamba amavili waManzi
Uyilo lwayo lusekwe kwivili lamanzi lendabuko kwaye liphuhlisiwe ziingcali ezivela kwiYunivesithi yaseTshayina iJiao Tong ukuze kuziswe ukuhlanjwa okuzinzileyo kuluntu apho bengenawo umbane.
I-Dolfi, hlamba iimpahla nge-ultrasound
Ngokutsho kwabadali bayo, iDolfi isusa ukungcola ngenkqubo ye-ultrasound kwaye isebenzisa amandla angaphantsi kwama-80 kunawo nawuphi na umatshini wokuhlamba oqhelekileyo.
Kufuneka sibeke iimpahla emanzini, hayi ngaphezulu kwe-2 kg, isepha encinci kunye nesixhobo seDolfi. Malunga nemizuzu engama-30 ukuya kwengama-40 iimpahla zethu ziya kucoca.
Isithambisi, into yesithathu ebalulekileyo kwindawo yokuhlamba iimpahla
Ukuba sibeka isepha ngakumbi kumatshini wokuhlamba, ayenzi kuphela umatshini unobunzima, kodwa sikwenza a umonakalo ongenamsebenzi nongenamsebenzi kokusingqongileyo.
Ukuba unedosi egqithisileyo yesepha, enye yezi zinto iya kwenzeka kuwe:
Iphunga elinamandla xa uvula umatshini wokuhlamba.
Iimpahla zibonakala zinamafutha kancinci okanye ziziva ziqinile xa zi-ayiniwe.
Uqaphele ukuvela kwamabala amancinci emnyango wegubu.
Idrowa yokuhlambela ihlala imdaka qho emva kokuhlamba, kukho intsalela.
Umbuzo ophambili uya kuba ungakanani isepha yokubekaNangona kunjalo, akukho dosi ichanekileyo kuba ixhomekeke kwisicoci, kumatshini wokuhlamba, kumenzi, kubudala bomatshini, njalo njalo.
Nangona kunjalo, iingcali zichaza:
“Ngokubanzi, phantsi kweemeko eziqhelekileyo, idosi yeemililitha ezingama-50 zesepha ezingamanzi yanele ukuhlamba i-4,5 kg.
Kukwabalulekile ukuba ungawugcwalisi umatshini wokuhlamba iimpahla ngeempahla ukuze ungakrazuki. Nokuba ungabinanto, kodwa ungabeki ubunzima obungaphezulu kokucetyiswayo.
Ngapha koko, ukuba ufana nam, unonophele ngezenzo zam zokukhathalela okusingqongileyo, olu khetho lokuhlamba iimpahla luya kuza luncedo:
Thenga isepha yendalo, uthintele iikhemikhali.
Lungisa esakho isepha esenziwe ekhaya ngesitena sesepha yaseMarseille, ioyile eyimfuneko ukuze iimpahla zinuke njengoko sifuna kunye neglasi yesoda yokubhaka. Ngaphantsi kweyure singayilungisa kwaye siyisebenzise iinyanga. Isisombululo kwezoqoqosho nakwezendalo!
Faka endaweni yokuthambisa ilaphu ngeviniga encinci yeapile kunye neeoyile ezifanelekileyo. Iviniga ayisetyenziselwa ukunxiba iisaladi kuphela, kodwa ikwanamandla aphezulu okuthambisa amalaphu.
Sebenzisa iisepha zendalo, ezo zobomi bonke.
Gwema ukusebenzisa iblitshi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Itekhnoloji entsha » Oomatshini bokuhlamba kwendalo kunye neengcebiso zokuhlonipha okusingqongileyo
Yintoni inverter yangoku kwaye yenzelwe ntoni